Kuisa mari mumusika weJapan wemusika: iyo Nikkei | Ehupfumi Zvemari
Iyo Nikkei ndiyo yakanyanya kukosha indekisi yeJapan equities, seimwe yedzimwe nzira dzekudyara mumisika yeEuropean stock. Iyo Nikkei 225 ndiyo inonyanya kuzivikanwa stock stock mumusika weJapan uye inoumbwa nemazana makumi maviri neshanu emvura yakawanda yakanyorwa pane Tokyo Stock Exchange. Kuve imwe yemadenderedzwa emari ane huwandu hukuru hwebhizinesi sezvo huwandu hwekutenga nekutengesa hwakaitwa hwakanyanya kwazvo, paine huwandu hukuru hwekushanda pakati pevashambadziri vanobva pasirese pasirese. Kusvika padanho rekuve yakakosha sosi yekureva kune chikamu chakanaka chevamiriri vezvemari vepasi.
Kupesana nemamwe maIndices, kukosha kwakadzokororwa pasi mumwedzi ichangopfuura, iine 15%, mune yepakati mamiriro anosvika 19.862 mapoinzi kubva pane yapfuura 23.510. Chikonzero chikuru chekugadzirisa uku kwave kuri kudzikira kwekudzika kwe2020 EPS kubvumirana kwe12%, iyo isina kugadziriswa nekuderera kweprimiyamu yenjodzi. Uye zvakare, zvinofanirwa kuyeukwa kuti gore rino kuwedzera kweVAT kunotarisirwa muna Gumiguru 2019. Mukupedzisa, kurudziro yevatengesi ndeyekutengesa masheya avo sezvo mukana wepakati pechiitiko unomuka i1,4%, ine fungidziro inofungidzirwa yezvibereko ye2%.
Kune rimwe divi, ine iyo yakajeka PER mune ino mamiriro angave ari 16,8 mazinga. Ichiri kune rimwe divi, zvinopa mukana wekutarisazve iyo parizvino iri 1,4%. Ndokureva, zvakaderera zvakanyanya mumisika yemari yeUnited States neEurope. Kubva pane ino maonero, haisiyo yakanakisa sarudzo yekuita kuti mari ichengetedze nekuti haina maonero anoyevedza ekudzora mumwedzi iri kuuya. Hazvishamise kuti kukosheswa kwavo kwatokwira zvakanyanya mumwedzi yapfuura uye pane maitiro ekururamisa mavari.
1 Nikkei 225: zvakawanda kutengesa kupfuura kutenga
2 Macroeconomic ako akasiyana
3 Ngozi dzekushanda muJapan
4 Zvishoma zvinozivikanwa tsika
5 Zvakanakira bhegi reJapan
Nikkei 225: zvakawanda kutengesa kupfuura kutenga
Chero zvazvingaitika, kurudziro iyi iri munzira yekumisikidza zvinzvimbo pane kutora chinzvimbo mumusika wezvemari wekumabvazuva. Ndizvozvo njodzi dzakakwirira kupfuura mwedzi mishoma yapfuura nekuda kwematanho atori ino inoenderana indekisi yemari dzepasi rose. Iko, panguva ino, kune mikana yakawanda yekurasikirwa nechikamu chemari yedu pane kuchiwana kuburikidza nekutenga nekutengesa masheya pamwe nekuchengetedzeka kwavo. Kunyangwe paine chokwadi chekuti inomiririra hupfumi hwakasimba senge yeJapan, imwe yeanonyanya kukosha padanho repasi rose.
Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kufunga kuti iwe inokosha kana kwete enda kune ino yepasi rose plaza kuti uite mari yako. Iwe haufanire kuzviita zvakapusa nekuti iwe unogona kuwana zvimwe zvinoshamisa zvisirizvo kubva zvino zvichienda mberi. Uye iwe haufanire kukanganwa chero nguva kuti izvo zvauri kutamba hazvisi zvimwe uye hapana chakaderera pane yako wega mari. Iwe hauzove neimwe sarudzo kunze kwekufungisisa iyi sarudzo iwe yaunogona kutora mumavhiki anotevera nekuda kwekukosha kwayo. Kunyanya kana usati wambotengesa nemisika iyi muzvikwereti.
Macroeconomic ako akasiyana
Kukura kwehupfumi kunodzoreredza mitengo yakanaka zvinoenderana neyakaenzana-epakati mukana, inotsigirwa nekutengesa kunze kwenyika uye kushandiswa kweruzhinji. Yakasarudzika yekumba kudiwa inotambura nekuda kwe kuwedzera kweVAT kubva pa8% kusvika pa10% iyo yakavezwa muna Gumiguru apfuura Nepo kune rimwe divi, fungidziro yeEPS dzinovandudzwa zvichidzika, sezvo makambani eJapan achizeza kupfuudza kuwedzerwa kwemubairo uye mbishi yezvinhu zvekuwedzera kusvika kumitengo yekupedzisira. Mutemo wezvemari wenyika ino yakakosha yeAsia icharamba iri yekugara ine mari yemitero chaiyo kusvika kupera kwa2020. Imwe pfungwa yekutaura ndeyekuti yen inofanira kuchengetedza nzira yakadzika mumwedzi iri kuuya ichipesana nekuchinjana kweimwe mari.
Dzese idzi dhata idzo dzakanongedzwa neBankinter yekuongorora dhipatimendi dzinofanirwa kushandiswa kutora danho nezve izvo zvidiki nevepakati varimari vanofanirwa kuita kugadzirisa zviwanikwa zvavo. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha zveaya mare emari akanyorwa pamusika weJapan wechitoro. Kune imwe nhanho, zvese zvinoita kunge zvinoratidza izvo nguva dzafamba kuita mashandiro mumusika wepasi rose wekuenzana. Kubva pane ino maonero, hakuzove nesarudzo kunze kwekumirira mukana wakanaka kwazvo wekuti titore zvatinosarudza mumusika wepasi rose wemasheya.
Ngozi dzekushanda muJapan
Ehezve, kushanda mumusika uyu wezvemari kune njodzi dzawo panguva ino uye zviri nyore kuti ivo vazivikanwe nevashambadzi vadiki nepakati. Kuti udzivirire pamamiriro asingadiwe neaya. Hazvishamise kuti iwo musika wezvemari yakanyanyisa kugadzikana uko kune misiyano yakakura pakati pemitengo yepamusoro uye yepasi yemitengo yavo yemastock. Zvakawanda kupfuura mumisika yekondinendi yekare sezvo kusiyana kwavo kunogona kusvika pa5% kana kunyangwe nekuwedzera kusimba. Nenjodzi inotevera inoitika mumasangano akavhurwa nevamiriri vezvemari.
Nepo kune rimwe divi, isu hatigone kukanganwa kuti kuvhura nzvimbo munzvimbo ino yemusika zvinoreva kutora makomisheni akakwira. Inenge yakapetwa kaviri yeaya anoitwa munzvimbo yedu yepedyo. Nezvataizove nazvo kunatsiridza purofiti yemabasa ekuita kuti mari iwedzere kubatsira. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kutariswa kuti maJapan indices anotengesa husiku munyika dzeEurope uye izvi zvinogona kuve rimwe dambudziko kugadzirisa hupfumi nekuchengetedza kwakazara. Ndokureva, isu hatigone kuvatevera pamwe nemuma stock indices ekare kondinendi.
Zvishoma zvinozivikanwa tsika
Kana tichiongorora njodzi dzinounzwa nemhando dzekuita idzi, hatifanire kudzikisira njodzi ine chekuita nekusaziva kwemakambani avo akanyorwa. Kana kanenge mazhinji acho, zvakanyanya. Kusvika pakuti hatizive kuti ndeapi masekete avari, ndedzipi shanduko yavo mumisika yemari kana shanduko yemugovani yavanayo nguva dzese. Ichi chiitiko chechokwadi chinogona kutikuvadza kana uchiita imwe nzira yekudyara mumusika weJapan wemasheya. Beyond dzimwe nzira dzekudyara idzo dzakati wandei hunyanzvi.
Uku kushayikwa kweruzivo kungave iko kukonzeresa kuti kudyara kwedu kusatumirwa nenzira kwayo uye kuti kunyangwe tinogona kurasikirwa nemari mukutora zvinzvimbo. Chinhu chinogona kudzivirirwa nekusarudza kune anozivikanwa emisika misika uye mukati matinoshanda neimwe frequency. Naizvozvo, musika wemakambani weJapan wakanangana nevashambadzi vane hunhu hwakanyanya vanoshuvira kuyedza nemamwe misika yezvemari, kunyangwe chero mamiriro acho ezvinhu achida kufamba uku kubva zvino zvichienda mberi. Hazvina kumboitika mune vanochengetedza kana vanodzivirira varimi vanoda dzimwe nzira dzekudyara.
Zvakanakira bhegi reJapan
Kunyangwe pane zvinopesana, aya mashandiro anewo awo akanaka divi uye ivo vanogona kubatsira kunyatso gadzira upfumi chero nguva yakapihwa. Imwe yacho ndeye apo a kupera simba mukutenda kugona yeWestern stock misika uye unogona kushandisa sosi iyi kuita kuti mari yako ibatsirwe nezvivimbiso zvikuru zvekubudirira. Asi kuita uku kunoitika kashoma kwazvo pagore uye kuburikidza nemaitiro akasarudzika. Kune rimwe divi, nguva dzekusimudzira mumusika uyu wezvemari dzinonyanya kutaurwa uye iwe unogona kuvandudza purofiti yemari dzako nezvikamu zvakakwirira kupfuura pakutanga.
Izvo zvakare zvakakosha kuti utarise chinhu chine chekuita nedaro kubva pamusika wezvemari wakakosha seuyu kunyanya. Kana iwe uchida kuisa mari mumusika weJapan wemusika une sarudzo ine hasha senge kuburikidza ne Investment funds zvichibva pane ino yepasi rose plaza. Iwe parizvino une chinoshamisa chinopihwa kubva kune epasi rese manejimendi makambani anoitwa pasi penzira dzakasiyana dzekudyara. Kunyangwe kuvasanganisa pamwe nemari yakamisikidzwa yemari midziyo kuitira kuchengetedza nzvimbo dzako muzviitiko zvakashata kwazvo kumisika yemari.
Chekupedzisira, mari yekudyara yeaya maficha yakanangana nenguva dzakareba dzekusingaperi uye mune zvese zviitiko zvepakati nepakareba. Kugadzira bhegi rekuchengetedza rakachengetedzeka kwemakore anouya. Nezvakanakira kuti iwe unogona kuendesa mari yemahara kana zvinhu zvikasaitika sekutarisira kwevanobata. Iine akateedzana emakomisheni ayo ari akati kwirirei kukwikwidza kupfuura mune mamwe mari anowanikwa mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo. Chero zvazvingaitika, iri imwe nzira nyowani yekudyara iwe yaunogona kushandisa chero nguva uye mune chero mamiriro. Beyond dzimwe nzira dzekudyara idzo dzakati wandei hunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Kuisa mari mumusika weJapan wemusika: iyo Nikkei
Chii chinonzi NIF